Alprostadil, (PGE1), E1 Prostaglandin (745-65-3) HPLC≥98% | AASraw
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1
SKU: 745-65-3. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1 (745-65-3), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
E1 Prostaglandin (PGE1), nke a makwaara dị ka alprostadil, bụ prostaglandin na-emekarị nke na-emekarị bụ ọgwụ. N'ime ụmụ ọhụrụ nwere nkwarụ ọrịa obi, ọ na-eji ngwa ngwa na-abanye n'ime oghere iji mepee ductus arteriosus ruo mgbe a ga-arụ ọrụ ahụ. Site na ogwu n'ime ntinye ma ọ bụ ntinye aka na urethra, a na-eji ya iji na-emeso arụmọrụ erectile.
Alprostadil, (PGE1), E1 bụ isi nke Characters
aha: Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1
Molekụla Formula: C20H34O5
Ọbara arọ: 354.48
Nchekwa Nche: 2 ° -8 ° C
Alprostadil, (PGE1), E1 E745 (65-3-XNUMX) ji mee ihe na steroid steroid
Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1 (CAS 745-65-3), nke a na-akpọ Avastin na Mvasi.
Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1 eji
Ọ ga - ewe oge 90 ka ị nweta ntinye mbụ nke bevacizumab. Onye dọkịta ma ọ bụ nọọsụ ga-ele gị anya ka ị hụ otú ahụ gị si eme ka bevacizumab. Ọ bụrụ na ịnweghị nsogbu dị oke mkpa mgbe ị nwetara ntinye mbụ nke bevacizumab, ọ ga-ewere 30 ka ọ bụrụ 60 nkeji maka ịnata nkwụsị nke fọdụrụ n'ime ọgwụ gị.
Kedu Alprostadil, (PGE1), ExNUMX E1 (745-65-3) na - arụ ọrụ
Maka ọgwụgwọ nke erectile dysfunction (ED), alprostadil na-atụgharị uche ahụ dị mma nke corpus cavernosum; Otú ọ dị, ọ bụghị ihe a maara kpọmkwem usoro ihe omume. Ọ na-egosi na mmetụta ndị ahụ na-abụ n'ihi ịba ụba nkwonkwo intracellular nke AMP cyclic. Alprostadil na-ejikọta ihe na-emepụta ihe na-eme ka adenylate cycse na-eme ka ọnyà cyclis na-eme ka ọ dị elu ma na-ebute AMP na intracellular, bụ nke na-eduga na mmalite nke protein kinase ma na-eme ka ahụ ike dị jụụ. Omume a dị iche na papaverine nke na - egbochi nsị oxidative phosphorylation nke na - emeghị ka ọrụ AMP cyclic na - egbochi mkpokọta calcium n'oge mgbagha ahụ ike. Alprostadil nwekwara ike ime ka omume nasopine na-eme ihe na-adịghị mma nke norepinephrine na-egbochi ịhapụ norepinephrine nke nwere ike ime ka ọ ghara ịmịpụ ya, ọ pụkwara ịkwalite omume nke nonurorenergic vasodilatory neurotransmitters. N'imeso ED, alprostadil na-eme ka e nwee ụlọ site n'iji obi ụtọ na-eme ka ahụ ike na-adọrọ adọrọ ma dilating carotosal arteries na alaka ha. A na-ejikarị akwara cavernosal ekpuchi ya site na ọganihu na-eme ka ọ dịkwuo elu ma na-eme ka ọ na-adaba ngwa ngwa. N'ihi ya, oghere ndị ahụ na-abaghị uru na-agbasawanye, ọbara ejikwara nke abụọ n'ime mkparịta ụka nke venules megide tunica albuginea. Iji mezuo tumescence na rigidity, na tunica albuginea aghaghị ịgba mbọ na-eme ka mkpụrụ vaịn banye n'ime ya ma si otú ahụ na-agbapụta ihe na-asọ oyi. A na-akpọkwa usoro a dị ka usoro ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ezumike. Alprostadil anaghị emetụta ejaculation ma ọ bụ orgasm.
N'iji ọgwụgwọ ọrịa obi na-adabere na ọrịa ductus arteriosus na-adabere na ya, alprostadil na-ejide onwe ya site na ịkwado ahụ ike nke ductus arteriosus. Alprostadil dị irè ma ọ bụrụ na e nyere tupu ịmechaa mmechi nke ductus arteriosus. Nchịkwa nke usoro ọkpụkpụ nke na-ebute ọrịa na-arịa ọrịa cyanotic (nke na-egbochi ọbara mgbapụta) na-ebute mmụba nke ọbara ọbara na / ma ọ bụ mmụba na ịgwakọta dị n'etiti usoro usoro na mgbakọ mgbagwoju anya nke na-eduga n'ịdị elu nke oge na-eme ka ikuku oxygen na-aga n'ihu (PaO2) na ikuku oxygen. Nzaghachi nke usoro cyanotic na usoro ọgwụgwọ ọ bụla na-emetụta mmekorita PO2. Ihe kachasị na-egosi na ọ dị na ndị na-adịghị na mmepe ọnụ Pao2 (<20 torr), narrowing ductus arteriosus, na ndị 4 ụbọchị ma ọ bụ nwata. Neonates na ụkpụrụ PaO2 nke 40 torr ma ọ bụ karịa na-enwekarị nzaghachi nye alprostadil.
N'ọnọdụ ndị na-ejighị ọbara na-arụ ọrụ, nchịkwa nke alprostadil nwere ike ime ka mgbochi ma ọ bụ mgbazi nke acidmia, mmepụta nke obi na-arịwanye elu na ọbara mgbali elu, mmụba ụbụrụ femoral, mmụba ọbara na-arụ ọrụ, ụda gradient nke na-arịda arịgo ọbara (na nchịkwa na nchikota nke aorta), na / ma ọ̄ bụ ma ọ bụ mgbatị nke ikuku mgbagwoju anya na-agbadata nrụgide aortic (na nkwụsị na nkwụsị nke ikpuchi mmiri). N'adịghị ka cyanotic neonates, arụ ọrụ nke alprostadil na acyanotic neonates adịghị adabere na afọ ma ọ bụ mmepe PaO2.
A na-eji Alprostadil (Prostglandin E1) mee ihe na-eme ka ọ bụrụ ndị okenye. Mmetụta nke usoro ọ bụla nke ịgwọ ọrịa ED dịgasị iche na ihe kpatara ya; Ọnụ ọgụgụ nke nzaghachi na-agbadakarị na ndị ọrịa na ED site na etiologies ndị e ji tụnyere ndị e jiri ED na-eme ka ọ bụrụ ọrịa na-ahụ maka ọrịa, psychogenic, ma ọ bụ vasculogenic. A na - ere ahịa ụdị ọgwụ abụọ dị iche iche maka ịgwọ ED: ngwaahịa transurethral (Muse) nke na - eji pellet a na - etinye na ya na urethra na ogwu (Caverject ma ọ bụ Edex) nke a na - etinye ya n'ime corpus cavernosa. Ụdị usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ dịka gel na-edepụta ihe na usoro ntinye nke liposomal na-adịghị emerụ ahụ na-enyocha. Dịka ụkpụrụ nduzi nke ED si kwuo, a na-ewere ụdị ntinye ederede 5 ederede ederede (PDE5 inhibitor) na usoro ọgwụgwọ mbụ. Usoro ọgwụgwọ nke abụọ na-agụnye ọgwụ mgbochi nje na ọgwụgwọ intra-urethral. Usoro ọgwụgwọ ọgwụ ọjọọ na-arụ ọrụ bụ ọgwụgwọ kachasị dị irè maka ED, site na nzaghachi a na-atụ anya ma kwadoro. Otú ọ dị, ọ bụ mmebi na caries ọmarịcha akụkụ-mmetụta gụnyere priapism na penile fibrosis. Ihe nkwado FDA bụ: Dịnarị na July 1995, MUSE na October 1996, na Edex na June 1997.
Alprostadil na prostaglandins ndị ọzọ na usoro E na-adịkarị na placenta na ductus arteriosus nke nwa ebu n'afọ. Ụdị prostaglandins nke ụdị E-type na-emegharị site na ntụrụndụ nkịtị nke ahụ ike. Ihe ndị ọzọ metụtara ọgwụ na-agụnye ịbawanye na mmepụta mkpụrụ obi, ikpochapụ nke arịa abụọ na usoro ihe ọkụkụ, dilation nke ductus arteriosus, mgbochi nchịkọta platelet, ezumike nke akwara bronchial, abawanye na ọbara mgbapụta ọbara, na oge nke oge gastric. A na-eji alprostadil na-eme ihe na-adịghị mma na-egbochi njide aka nri ma ọ bụ aka ekpe iji nọgide na-enwe njikọ nke ductus arteriosus rue oge ịwa ahụ. Alprostadil na-emekarị ka ọ dị irè karị na ndị ahụ na-emeghị ka ọnụ ọgụgụ ọbara ọbara bụ PO2 na ndị 4 ụbọchị ochie ma ọ bụ karịa. N'ime oge ndị okenye karịa 4 ụbọchị, enwere nrịta na arụmọrụ dị nro na-adọrọ adọrọ site na mgbanwe mgbanwe nke mgbanwo na mgbidi nke ductus arteriosus. Ngwá ọrụ ọhụụ na-achọ nlekọta iku ume na nchịkwa n'ihi na apnea na-amalite na 10-12% nke neonates. Alprostadil bụ FDA kwadoro na ndị ọrịa na-eto eto dị ka ndị na-eto eto dị ka ndị na-eto eto. FDA na VR Pediatric kwadoro na 1981.
Esi zụta Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1 si AASraw